म प्रेममा विश्वास गर्दिन तर यसमा सकारात्मक सोच राख्छु : निमिषा त्रिपाठी
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पौष २६, २०७३ समय: ७:००:३२
२६ पुस, रोशन पोखरेल बिराटनगर। नेपाली आधुनित संगीतको क्षेत्रमा एक नयाँ नाम हो निमिषा त्रिपाठी , बिगत ३ बर्ष देखी कलाकारिता गायन र मोडलिंगमा उनि निरन्तर क्रियाशिल छिन।
“तिमि मात्र हैन मलाई माया गर्ने……” बोलको गीत बाट आफ्नो सांगीतिक यात्रा सुभारम्भ गरेकि उनले हाल सम्म परदेसि को बसाइमा ,राम्रो संग मान है यो दसैं, नाचे म यसपाली तिजमा , एउटै धर्ती थियो सानू, जिन्दगीमा यति सम्म दु:ख लेख्या हुदोरहेछ आदि गितहरु बजारमा पठाइसकेकि छिन् भने अन्य थुप्रै गीतहरु अझै बजारमा आउने तयारीमा छन् ।
नेपालको सांगीतिक क्षेत्र दिन प्रति दिन धरासाही बन्दै गैरहेको यो अवस्थामा पनि निरन्तर रुपमा अगाडि बढेकी कलाकार निमिशा त्रिपाठी जस्ता कलाकारहरुको निरन्तरतालाई सलाम प्रकट गर्नै पर्छ, किन कि उनीहरुको खाइ नखाई यस क्षेत्र प्रतिको लगानीले सिंगो सांगीतिक क्षेत्रलाई धनि बनाईरहेको छ ।
सोहि अनुरुप , हामीले पनि यस्तो देशको गहना जस्तो कलाकारहरुलाई यथास्थितिमा राख्नु पर्छ भन्ने उदेश्यले उनै गायिका तथा मोडल निमिशा संगको सहकर्मि साथी रोशन पोखरेल ले अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
म काठमान्डौको आर आर क्याम्पसमा जर्नालिजम पढदै छु साथै कलाकारिता क्षेत्रमा समेत क्रियाशिल रहेको छु विगत ३ वर्ष देखी
दोलखाकै घरैमा मेरो बाल्यकाल बित्यो , जे होस खुसी साथ बिताए मैले मेरो बाल्यकाल । सानै देखी हरेक सास्कृतिक कार्यक्रममा गित संगितमा गाउने गर्थे ।
७ जना दाजु भाई दिदि वहिनी छौ हामी
म सानै देखि अतिरिक्त क्रियाकलापमा सकृय थिए , गित गजल बक्तित्वकला बादबिबाद हाजिरीजबाफ आदि इत्यादिमा सधै पुरस्कृत भैरहन्थे , गित संगीत मै लागौंला भन्ने सोच त थिएन तर नाम हुने सबैले चिन्ने काम गर्छु भन्ने थियो ,अध्ययनको शिलशिलामा काठमान्डौमा आएपछि गित संगित सिक्नको लागी रहर लाग्यो अनि कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने निर्णय गरे ।
प्राय लेडिज कलाकारहरु अलिक धमण्डी हुन्छन रे ?
मुस्कुराउदै!!! आफुसगँ केहि अलग खुवी विशेष छ भने केटी मात्र जो कोही पनि धमण्डी हुन्छन् नी अनि केटीहरुको धमण्ड त गड गिफट हो जस्तो लाग्छ तर म अरु जस्तो धमण्डी चै छैन
हा हा हा !!! हजुर म अबिबाहित हुँ ।
तपाई प्रेममा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ ?
म त्यति विश्वास गर्दिन हरेक कुरालाई सकारात्मक तरिकाले सरकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
म गित गाउने साथै नृत्यमा रुचि भएकोले बिदेशको लागि फोन आउछ तर अहिले सम्म मैले विदेशमा गित गाएर श्रोता माझँमा पुगेको छैन । आगामी दिनमा चै चाडै जाने विचारमा छु ।
मागी गरेर प्रेम पो गर्नु पर्छ की तर यस बारेमा सोचेको छैन अहिले नै ‘ यसरी कला क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको मान्छेलाइ
राती राती आफ्ना शुभचिन्तकबाट फोन आइरहदा घरका सदस्यको प्रतिक्रिया कस्तो आउछ ?
मेरो घरमा सवैजना फेमेलियर भएर होला मेरो हरेक काममा सपोर्ट गर्नुभएको छ । मलाई याद छ । बुवाले सानोमा छदाँ घरमा मेरो लागी छुटटै रेडियो ल्याइदिनुभएको थियो । म पनि छुट्टी को समय रेडियोमा गित सुन्दै नाच्ने गर्थे । तर मेरो दिदिले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ ।
अन्य घरपरिवारको तर्फबाट तपाइँ यो क्षेत्रमा लाग्दा खेरिका साथ सहयोग कस्तो छ ?
ठिकै छ । सवैजनाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ ।
म विहान उठने वितिकै विहान कलेज जान्छु त्यसपछि कलेजबाट आएर म्युजिक कलासमा जान्छु फुर्सदको समयमा नेटमा साथी भाइहरु र आफन्त सगँ कुराकानी फेसवुकमा कुरा गर्छु ।
कलाकारिता क्षेत्रको श्रीबिध्दिको लागि राज्यले कलाकारको लागी कस्तो भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?
हेर्नुस सर्बप्रथम त हामी आफुमा सक्षम हुन पर्छ, आफुमा एक जुट हुन पर्छ, हामिमै एकता छैन, दोस्रो कुरा राज्यले कलाकार लाई गहनाको रुपमा होइन अङ्गको रुपमा स्विकार्न सक्नु पर्छ र कलाकारको लागि केही सहज ब्यब्स्था गर्दिन पर्छ । कलाकारिताको सम्पुर्ण बिधालाइ एकै ठाउमा समेटेर सबैलाइ सेन्सर लगाएर पास गराउन पर्छ, बिकृत पक्षलाई कारबाही गर्न हिच्किचाउनु हुदैन ।
तपाईहरुको आत्मीय साथ र सहयोगको लागी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै तपाईहरुको यो मिडियाको अझ प्रगतीको लागी शुभकामना दिन चाहन्छु । नेपाली गित संगितलाई माया गर्नुहोला र नव प्रवेशी लाई पनि साथ र सहयोग दिनुहोला भन्न चाहन्छु । धन्यवाद हामिलाइ महत्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा । रोशन जी तपाई लगायत तपाई क्रियाशिल मिडियालाई लाई पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु , मेरो मनको तिता मिठा गन्थनको पोको फुकाउनी मौका दिनु भएकोमा , यो अनलाइनले सबैको मन जितोस ।